Fahatakarana ny fanamby (sy ny fahasorenana) amin'ny HTML Email Design | Martech Zone
Fahatakarana ny fanamby (sy ny fahasorenana) amin'ny HTML Email Design
Alarobia, Martsa 23, 2022 Alatsinainy, May 16, 2022 Douglas Karr
Saingy ny mpanonta mailaka dia ao ambadika. Izao no antony…
Ny famolavolana mailaka HTML dia sarotra lavitra noho ny tranonkala iray
Raha mila mailaka HTML tsara tarehy ny orinasanao, dia sarotra kokoa ny fizotrany noho ny fananganana pejy web noho ny antony maromaro:
Tsy misy fenitra - TSY misy fanarahana hentitra amin'ny tranonkala rehetra fitsipika amin'ny mpanjifa mailaka izay mampiseho mailaka HTML. Raha ny marina, virtoaly ny mpanjifa mailaka rehetra sy ny dikan-teny rehetra amin'ny mpanjifa mailaka rehetra manao zavatra hafa. Ny sasany dia hanome voninahitra ny CSS, endritsoratra ivelany, ary HTML maoderina. Ny hafa dia manaja ny fandokoana an-tsipika sasany, tsy hampiseho afa-tsy fitambarana endritsoratra, ary tsy miraharaha ny zava-drehetra afa-tsy ny rafitra entin'ny latabatra. Tena mahatsikaiky tokoa amin'izao fotoana izao fa tsy misy olona miasa amin'ity olana ity. Vokatr'izany, nanjary orinasa lehibe ny famolavolana môdely izay manome ny mpanjifa sy ny fitaovana tsy tapaka ary mety ho lafo be.
Fiarovana ny mpanjifa mailaka - Tamin'ity herinandro ity ihany, Apple Mail dia navaozina mba hanakanana ny sary rehetra amin'ny mailaka HTML amin'ny alàlan'ny default izay tsy tafiditra ao amin'ny mailaka. Na omenao alalana hampiditra mailaka ho azy ireo indray mandeha ianao, na tsy maintsy avelanao hanaisotra ity kira ity ny kira. Miaraka amin'ny fikirakirana fiarovana amin'ny mpanjifa mailaka, misy ihany koa ny firafitry ny orinasa.
Fiarovana IT - Ny ekipanao IT dia mety hametraka fitsipika henjana momba ny zavatra azo adika amin'ny mailaka. Raha toa ka avy amina sehatra manokana tsy voasora-potsy ao amin'ny firewall orinasa ny sarinao, ohatra, dia tsy hiseho amin'ny mailakao fotsiny ny sary. Indraindray dia tsy maintsy namolavola mailaka izahay ary nampiantrano ny sary rehetra tao amin'ny lohamilin'ny orinasa mba ho hitan'ny mpiasany manokana ireo sary.
Mpamatsy tolotra mailaka - Ny tena ratsy kokoa, ireo mpanamboatra mailaka izay mpanome tolotra mailaka (ESPs) tena mampiditra olana fa tsy manery azy ireo. Raha mampiroborobo ny mpamoaka azy izy ireo dia Izay hitanao dia azonao (Fandrarian-dahatsoratra marevaka), ny mifanohitra amin'izany matetika no marina amin'ny famolavolana mailaka. Hojerenao amin'ny sehatra misy azy ny mailaka, avy eo ny mpandray mailaka dia hahita ny karazana olana rehetra momba ny famolavolana. Matetika ny orinasa no misafidy tonian-dahatsoratra manankarena fa tsy tonian-dahatsoratra mihidy mihevitra fa manana endri-javatra maro kokoa noho ny iray ny orinasa. Ny mifanohitra amin'izany no marina… raha mila mailaka mivadika tsy tapaka amin'ny mpanjifa mailaka rehetra ianao, ny tsotra kokoa no tsara kokoa satria kely kokoa ny mety ho diso.
Famerenan'ny mpanjifa mailaka - Misy mpanjifa mailaka an-jatony, samy manome HTML amin'ny fomba hafa manerana ny desktop, fampiharana, finday ary mpanjifa mailaka. Na dia mety manana toerana hametrahana lohateny ao amin'ny mailakao aza ny mpamoaka lahatsoratra mahafinaritra anao amin'ny mpanome tolotra mailaka anao… ny padding, ny sisiny, ny haavon'ny tsipika ary ny haben'ny endritsoratra dia mety tsy mitovy amin'ny mpanjifa mailaka tsirairay. Vokatr'izany dia tsy maintsy ampangaina amin'ny HTML ianao ary kaody amin'ny fomba hafa ny singa tsirairay (jereo ny ohatra etsy ambany) - ary matetika manoratra amin'ny maningana izay manokana amin'ny mpanjifa mailaka - mba hahazoana mailaka alefa tsy tapaka. Tsy misy karazana sakana tsotra, tsy maintsy manao lamina entin'ny latabatra ianao izay mitovy amin'ny fananganana tranonkala telopolo taona lasa izay. Izany no mahatonga ny fandrafetana vaovao rehetra mitaky ny fampandrosoana sy ny mpanjifa mailaka ary ny fitiliana fitaovana. Ny zavatra hitanao ao amin'ny boaty fidiranao dia mety ho hafa tanteraka amin'ny zavatra hitako ao amin'ny boaty fidiranao. Izany no mahatonga ny rendering fitaovana toy ny Email amin'ny asidra or Litmus dia tsy maintsy miantoka ny famolavolanao vaovao miasa amin'ny mpanjifa mailaka rehetra. Ity misy lisitra fohy momba ny mpanjifa mailaka malaza sy ny motera famoahany:
Apple Mail, Outlook ho an'ny Mac, Android Mail ary iOS Mail kitapo web.
Fampiasana Outlook 2000, 2002 ary 2003 Internet Explorer.
Fampiasana Outlook 2007, 2010 ary 2013 Microsoft Word (eny, Teny!).
Ny mpanjifan'ny Webmail dia mampiasa ny moterany tsirairay avy (ohatra, Safari dia mampiasa WebKit ary Chrome mampiasa Blink).
Ohatra iray amin'ny HTML ho an'ny Web Vs. mailaka
Raha mila ohatra iray mampiseho ny fahasarotan'ny famolavolana amin'ny mailaka mifanohitra amin'ny tranonkala ianao, ity misy ohatra tonga lafatra avy amin'ny lahatsoratr'i Mailbakery 19 Fahasamihafana lehibe eo amin'ny mailaka sy ny HTML Web:
Tsy maintsy manangana latabatra maromaro isika izay mampiditra ny fomba rehetra ilaina amin'ny fametrahana ny bokotra sy hahazoana antoka fa tsara amin'ny mpanjifa mailaka. Hisy ihany koa ny marika style miaraka amin'ny tampon'ity mailaka ity mba hampidirana ireo kilasy.
Afaka mampiasa takelaka ivelany misy kilasy isika hamaritana ny tranga, ny fampifanarahana, ny loko ary ny haben'ny marika vatofantsika izay miseho ho bokotra.
Ahoana no hialana amin'ny olana momba ny famolavolana mailaka
Ny olana momba ny famolavolana mailaka dia azo sorohina amin'ny fanarahana dingana mendrika:
Famolavolana maodely - Mamorona môdely misy lamina sy sakana votoaty samihafa izay mahafaoka ny fomba rehetra tianao hovokarina amin'ny endrika mailakao. Rehefa mampihatra mpanjifa izahay dia manosika azy ireo foana mamolavola mailaka ho an'ny ho avy – tsy ny fanentanana mailaka manaraka alefa ihany. Amin'izany fomba izany, afaka mamolavola tanteraka, mamolavola, mitsapa ary mampihatra ireo vahaolana ilaina isika alohan'ny Nandefa mailaka voalohany izy ireo.
Testing template - Ny fahatakarana ny mpanjifa mailaka ampiasain'ny mpanjifanao ary ny fahazoana antoka fa ny mailaka HTML-nao dia voasedra tanteraka amin'ny finday sy ny biraonao dia zava-dehibe alohan'ny hametrahana modely. Afaka mamolavola mailaka ara-bakiteny avy amin'ny lamina photoshop izahay… fa ny manapaka sy manapaka azy amin'ny mpanjifan-databatra, mpanjifa mailaka mifanandrify dia tena ilaina amin'ny fametrahana endrika mailaka izay mety sy tsy miovaova.
Fitsapana anatiny - Rehefa voavolavola sy voasedra ny môdely anao, dia tokony halefa any amin'ny lisitry ny voa anatiny ao anatin'ny fikambanana izany mba handinihana sy hankatoavina. Azonao atao mihitsy aza ny manomboka amin'ny ampahany voafetra amin'ny olona mba hahazoana antoka aloha fa tsy misy firewall na olana momba ny fiarovana mifandraika amin'ny fandefasana ny mailaka ao anatiny. Raha manangana ohatra amin'ny mpanome tolotra mailaka vaovao ianao, dia mety hahita olana amin'ny sivana na fanakanana mifandray amin'ny fampidirana ny mailaka ao amin'ny boaty fidirana aza ianao.
Fandikan-teny maodely – Aza ovaina ny fandrafetana na ny endrikao raha tsy miasa amin'ny kinova vaovaon'ny môdely izay azo amboarina, andrana tsara ary apetraka. Orinasa maro no tia tetika tokana ho an'ny fampielezan-kevitra tsirairay… Izany dia manampy fotoana iray taonina amin'ny fizotran'ny varotra mailaka anatiny. Ary, mety tsy azonao ny singa ao amin'ny mailakao izay miasa tsara amin'ny singa tsy. Ny tsy fitoviana dia tsy fomba iray hanamora ny dingana fotsiny, fa zava-dehibe amin'ny fitondran-tenan'ireo mpanjifanao ihany koa.
Exceptions Mpanome tolotra mailaka - Saika ny mpanome tolotra mailaka rehetra dia manana fitaovana hamahana ireo olana atolotry ny mpanamboatra mailaka. Matetika izahay dia afaka manampy CSS manta amin'ny kaonty iray - na manana sakana votoaty izay tsy maintsy ampidirina amin'ny mailaka rehetra - mba hampiasain'ny orinasa ny tonian-dahatsoratra mailaka natsangana fa tsy handrava ny famolavolana ny mailakao. Mazava ho azy fa mety mitaky fiofanana sy fanaraha-maso ny fizotran'ny fametrahana ireo dingana ireo mba hahazoana antoka fa manaraka azy ireo. Na - mety te-hamolavola ny endrika mailakao fotsiny ianao amin'ny vahaolana izay voaporofo fa miasa amin'ny mpanjifa sy fitaovana, dia apetaho ao amin'ny mpanome tolotra mailaka izany.
Email Design Platforms
Satria ny sehatra serivisy mailaka dia nanao asa ratsy tamin'ny fananganana sy fikojakojana ny mpanjifa cross-client sy cross-device tsy tapaka ny mpanamboatra, sehatra lehibe maromaro no tonga an-tsena. Ny iray efa nampiasainay betsaka dia ny Stripo.
Tsy mpamorona mailaka fotsiny i Stripo, fa manana tranomboky misy maodely 900 mahery izay azo ampidirina mora foana. Rehefa mamolavola ny mailaka ianao dia azonao atao ny mandefa mailaka amin'ny ESP 60+, ary mpanjifa mailaka, anisan'izany MailChimp, HubSpot, Fanaraha-maso fanentanana, AWeber, eSputnik, Outlook, ary Gmail. Ny tsara indrindra amin'ireo maodely Stripo rehetra dia miaraka amin'ireo andrana fandefasana mailaka tafiditra mba hahafahanao miantoka fa voasedra izy ireo ary miasa tsy tapaka amin'ny mpanjifa mailaka 40 mahery.
Midira ao amin'ny Demo Editor Stripo
Fampahafantarana: Mampifandray ny ahy aho orinasan-tsaina amin'ny marketing izay mamolavola sy mametraka mailaka mifanandrify amin'ny mpanjifa ho an'ny marika malaza amin'ny mpanome tolotra mailaka rehetra. Izaho koa dia mpiara-miasa amin'ny Stripo ary mampiasa ny rohiko ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: akimpiko kelympanamboatra mailakamailaka mpanjifafamolavolana mailakamailaka Marketingfandefasana mailakampanonta mpanome tolotra mailakampanome serivisy mailakafamolavolana môdely mailakafitiliana môdely mailakafamoahana môdely mailakamailaka modelyfitsapana mailakatonian-dahatsoratra mailakamailaka htmlInternet Explorermailbakeryrahona marketingteny microsoftstripokitapo webWebmailFandrarian-dahatsoratra marevaka
Fampiharana Elfsight: E-varotra, endrika, votoaty ary Widget ara-tsosialy mora azo ho an'ny tranokalanao